किन भेटिँदैनन् मान्छे बेच्ने दलाल ? |
किन भेटिँदैनन् मान्छे बेच्ने दलाल ?
प्रकाशित मिति :2018-05-16 15:59:06
– गोविन्द देवकोटा
बाँके । पर्साकी एक किशोरीलाई गाउँकै दिदी र साथीले भारतमा राम्रो लगाउन खान पाउने अभिलासा देखाए । कमजोर आर्थिक अवस्थाको परिवारकी १३ वर्षीया किशोरी जागिर पाउने र राम्रो केटासँग विवाह हुने आश्वासनमा लोभिइन् । भारत जान राजी भईन् ।
उनीहरूले किशोरीलाई भारतको कोठीमा पुर्याए । जागिर लगाउने र राम्रो केटासँग विवाह गराइदिने आश्वासनमा कोठीमा पुगेकी ती किशोरीको पाँच वर्षपछि बैशाख ४ गते उद्धार भयो ।
दिल्लीको जीवीरोडस्थित ६४ नम्बर कोठीमै ती किशोरीले गतवर्ष छोरी जन्माइन् । छोरी जन्मिए पनि साइडमा छोरीलाई राखेर ग्राहकको सन्तुष्टी पुरा गर्नु उनको बाध्यता थियो ।
बैशाख ४ गते माइती नेपालले उनलाई उद्धार ग¥यो । उनी कोठीमै जन्मिएकी छोरीसहित माइती नेपालको संरक्षणमा छिन् । किशोरीको परिवारसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन ।
नुवाकोटकी १७ वर्षकी किशोरी पनि गाउँले दिदीको आश्वासनमा परेर दिल्लीको जीवरोडस्थित ६४ नम्बर कोठीमै पुगिन् । डेढ वर्षअघि किशोरी त्यहाँ पुगेकी थिइन् । स्थानीय प्रहरी, भारतस्थित नेपाली दुतावास, माइती नेपाल लगायतको पहलमा नुवाकोटकी किशोरीको एक महिना अघिमात्रै उद्धार भयो ।
सिन्धुपाल्चोककी २४ वर्षीया युवती पाँच वर्षअघि दिल्लीको एक कोठीमा पुगिन् । जीवीरोडको वेश्यालयमा एक वर्ष बिताएपछि उनलाई साहुले आग्राकी कोठी सञ्चालकलाई बिक्री गरेको थियो । आग्रामा चार वर्ष बिताईन् । माइती नेपालको पहलमा उद्धार भएपछि उनले नरकबाट मुक्त भएको बताईन् ।
बाँकेकी १७ वर्षीया किशोरीलाई केआई नेपालको पहलमा जीवीरोडको एक वेश्यालयबाट गएको महिना बैशाख २३ गते उद्धार गरियो । उनलाई विवाहको आश्वासनमा भारत लगेका बाँकेको कोहलपुरका सुनिल थापा नामको युवकबाट बेचिएकी थिईन् ।
माइती नेपालका क्षेत्रीय प्रमुख केशव कोइरालाका अनुसार गएको चैत्र २१ गते भारतको आग्रास्थित कस्मिरी बजारको कोठीबाट पाँच जना नेपाली किशोरीलाई माइती नेपालकै पहलमा उद्धार गरियो ।
कास्मिरी बजारमा प्रियादिप नामकी भारतीय महिला सञ्चालक रहेको कोठीबाट चारजना भारतीय महिलासहित पाँच जना नेपाली महिलालाई उद्धार गरिएको थियो ।
उद्धार गरिएका नेपाली युवतीमध्ये दुईजना १८ वर्षका र एक जना १७ वर्षकी छन् । यस्तै दुईजना २२ र २४ वर्षका छन् । उनीहरूलाई उद्धारपछि अहिले आग्राकै नारी निकेतनको संरक्षणमा राखिएको छ ।
कोठी सञ्चालक विरुद्ध आग्राकै सिभिल कोर्टमा मुद्दा दायर गरिएकाले मुद्दाको फैसला भएपछि मात्रै पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल ल्याइने जनाईको छ ।
माइती नेपालले सन् २००२ देखि हालसम्म २ सय ४३ जना महिलाको कोठीबाट नै यौन धन्दामा रहेकै अवस्थामा उद्धार गरेको छ । भने सीमा नाका र कोठीबाट गरी ६ सय १९ जनाको उद्धार गरिएको माइती नेपालले जनाएको छ ।
यस्तै मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गरिरहेको केआई नेपालले पनि सन् २००८ देखियता हरेक वर्ष सीमा नाकाबाट पाँच सयको हाराहारीमा नेपाली किशोरी तथा युवतीको उद्धार गर्ने गरेको छ ।
केआई नेपालले सन् २०१७ बाट मात्रै भारतीय कोठीबाट महिलाको उद्धार गर्न थालेको हो । यो अवधीमा १२ जना किशोरी तथा युवतीको भारतीय कोठीबाट उद्धार गरिएको केआई नेपालका कार्यक्रम निर्देशक इन्द्रराज भट्टराईले बताए ।
पक्राउ पर्दैनन् दलाल
बेचिएका बालिका तथा किशोरीहरूको उद्धार गरिए पनि उनीहरूलाई नारकीय जीवन भोग्न बाध्य बनाउने दलाल भने पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।
नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको ऐन पनि बलियो छ । तर दलाल कारबाहीमा परेको संख्या एकदमै न्यून छ । माइती नेपालको सहयोगमा उद्धार गरिएका महिलाका तर्फबाट हालसम्म ७७ वटा मात्रै मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दा चलाइएको छ । ती मध्य २० जना बेचबिखनमा संलग्नहरूलाई मात्रै कानुनी कारबाही भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ ।
‘दलालहरू सीमा पारि नै बस्छन्, त्यसैले पत्ता लगाउन मुस्किल हुन्छ’ कोइरालाले भने, ‘फोन, फेसबुमार्फत सीमा पारी बोलाउने र उतैबाट फरार हुने भएका कारण पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको हो ।’
जिल्ला अदालत बाँकेमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म १९ वटा मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भएका छन् । ३६ जना महिला तथा बालबालिकालाई बेचबिखन गरेको आरोपमा परेको मुद्दामा २९ जनाका विरुद्ध जिल्ला अदालत बाँकेले कारबाहीका लागि आदेश दिएको छ ।
जसमध्ये प्रहरीले २० जना पुरुषलाई पक्राउ गरी जेल चेलान गरिसकेको जिल्ला अदालत बाँकेका रजिष्टार दन्तपाणी लामिछानेले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका मुद्दा शाखाका प्रमुख रणबहादुर विष्टका अनुसार कारबाही आदेश भएका मध्ये नौ जना फरार छन् ।
उनले अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरूमा आफूहरूले अपराधीलाई उन्मुक्ति नदिएको दाबी गरे । फरार रहेका पाँच जना पुरुष र चार जना महिला पीडकको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी कहाँ आएका घटनाहरूमा अनुसन्धान गरेकै छौं, नेपाली दलालहरू हाम्रो पहुँचमा हुने भएका कारण पक्राउ गर्छौं । तर भारतीय दलाल भने हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छन्’ उनले भने ।
मानव तस्करहरूको तलदेखि माथिसम्म सञ्जाल हुने र कतिपय अवस्थामा पीडितले बयान फेरिदिँदा सबै अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । देशभर नै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको जिल्ला समिति छ ।
बाँके जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको जिल्ला समिति गठन भएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले प्रत्येक उद्धार र रोकथामको कार्यमा आफू संलग्न रहेको बताए । उनले दलाल खोज्ने काममा पनि समिति अन्तर्गत नै रहेको प्रहरी प्रशासनको उल्लेखनीय भूमिका रहेको दाबी गरे ।
संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा समस्या
भारतमा यौन शोषण तथा जोखिममा परेका नेपाली चेलीलाई उद्धार गर्न नेपालमा सरकारी संयन्त्रको अभाव देखिएको छ । भारतस्थित नेपाली दुतावासले पनि प्रभावकारी सहयोग नगर्ने बेचबिखन विरुद्धका अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।
‘नेपाली चेलीहरू कोठीमा छन् भन्ने पक्का खबर दिँदा पनि उनीहरुको उद्धार हुन सकेको छैन’ केआई नेपालका भारत प्रतिनिधि नविन जोशी भन्छन्, ‘सरकारी संयन्त्र बलियो नभइदिँदा हामीले ज्यान जोखिममा पारेर उद्धार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल आइसकेपछि दलाल पक्राउ गर्न प्रहरीले तदारुकता नदेखाउँदा उद्धार भइसकेका किशोरी तथा बालिकाहरूलाई झनै जोखिम हुने गरेको छ । सरकारी उद्धार संयन्त्र नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको माइती नेपालका संयोजक कोइराला बताउँछन् ।
प्रहरीले बलियो भएर दलाल पक्राउ गर्न अनुसन्धान नगरिदिँदा मानव बेचबिखनमा संलग्नको बनोबल बढेको मानवबेचबिखन विरुद्ध काम गर्दै आएकी अभियन्ता सपना भट्टराइले बताइन् ।
अधिकारकर्मी भट्टराईले महिलालाई दलालसम्म पुर्याउने सहयोगीहरू पक्राउ परे पनि मुख्य योजनाकार भने कानुनी कारबाहीमा आउन नसकेको बताईन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज नेउपाने मानव बेचबिखनका दलालले पीडित परिवारका सदस्यलाई नै प्रलोभनमा पार्ने कारणले दलाल पक्राउ गर्न प्रहरीलाई समस्या भएको बताउँछन् । यद्यपि प्रहरीले मानव बेचबिखनका उजुरीलाई प्राथकिमतामा राखेर अनुसन्धान गर्ने गरेको उनको दाबी छ ।
(गोविन्द देवकोटा बाँकेबाट पत्रकारिता गर्नुहुन्छ ।)